विद्यालयले अभिभावकसित समेत समन्वय गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने…. – Molamkhabar
विद्यालयले अभिभावकसित समेत समन्वय गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने….
३० मंसिर २०७७, मंगलवार ११:३०
कोरोना भाइरस ९कोभिड–१९० पछिको अवस्थामा विद्यालय पुनः सञ्चालन गर्न उपत्यकाका स्थानीय तहमा फरक–फरक खाले अभ्यास देखिएको छ ।
उपत्यकाका केही स्थानीय तहले विद्यालय सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन् भने कतिपय विद्यालय खोल्ने नखोल्ने निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन् । केही स्थानीय तहले माथिल्लो तहबाट विद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी थालेका छन् । ललितपुर महानगरपालिकाले विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति दिने नीतिगत निर्णय गरेको छ । कुन विद्यालय कहिलेदेखि खोल्ने र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराको निर्णय सम्बन्धित विद्यालयले नै गर्नेछन् । महानगरपालिकाका शिक्षा प्रमुख महेन्द्र क्षेत्रीले विद्यालयको भौतिक अवस्था, विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय गर्ने बताउनुभयो ।
काठमाडौँ महानगरपालिका भने कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण कायमै रहेको अवस्थामा विद्यालय खोल्ने या नखोल्ने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णयमा पुग्न सकेको छैन । महानगरले विद्यालय कसरी र कुन मोडलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा सरोकारवालासँग छलफल जारी राखेको छ ।
विगत केही दिन यता विद्यालयका प्रधानाध्यापकसित यस विषयमा राय सुझाव लिने काम गरिएको छ । विद्यालय पुनः सञ्चालनका विषयमा आवश्यक निर्णय लिन अभिभावक, विद्यालय सञ्चालक, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रतिनिधि, निजी विद्यालयका शिक्षक लगायतसँग छलफल गरेर मात्र विद्यालय सञ्चालनको निर्णय गर्ने योजना रहेको महानगरका शिक्षा अधिकृत मोतीराज खनालले जानकारी दिनुभयो ।
निजी र सामुदायिक विद्यालयका सानो कक्षाका विद्यार्थीलाई तत्काल अनलाइनमै पढाउन आफूहरूले अनुरोध गरेको जानकारी गोदावरी नगरपालिकाका शिक्षा प्रमुख तथा उपसचिव देवीप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो । जाडोको समयमा बालबालिकालाई जोखिम बढी हुनसक्ने भएकाले तत्काल विद्यालयमा नबोलाउन भनिएको र यस विषयमा अनुगमनसमेत गरिएको जनाइएको छ । तीन दिनको अवधिमा १५ वटा जति विद्यालयको अनुगमन गरिएको र विद्यालयमा स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरेको पाइएको जानकारी उहाँले दिनुभयो । यस विषयमा अभिभावकसँग समेत आवश्यक समन्वय गर्न नगरपालिकाले विद्यालयलाई निर्देशन गरेको छ ।
काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति दिएसँगै विद्यालय पुनः सञ्चालन हुन थालेका छन् । नगरपालिकाका प्रमुख सन्तोष चालिसेले विद्यालयले मापदण्ड बनाएर पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको र यसमा कुनै समस्या नदेखिएको बताउनुभयो ।
विद्यार्थीलाई आलोपालो बोलाएरसमेत कतिपय विद्यालय सञ्चालन गरिएका छन् । विद्यालयको भौतिक अवस्था, विद्यार्थी सङ्ख्याका कारण पनि कतिपय विद्यालय विभिन्न चरणमा चलाउनुपर्ने अवस्था रहेको जनाइएको छ ।
कीर्तिपुर नगरपालिकाले तयारी पूरा गरेर विद्यालय पुनः सञ्चालन गर्न सक्ने बाटो खोलेको छ । प्रारम्भिक चरणमा कक्षा ८, ९ र १० वा १, २ र ३ गरी विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने गरी नगरपालिकाले विद्यालय सञ्चालनको बाटो खुला गरेको हो ।
वैकल्पिक विधिको पठनपाठनमा आबद्ध हुन नसकेका विद्यार्थीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न नगरपालिकाले अनुरोध गरेको छ । भौतिक रूपमा कक्षा सञ्चालन भएका विद्यालयलाई आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गर्ने निर्णय नगरपालिकाले गरेको छ । गोरखापत्रबाट
म मरे भने मेरो काजक्रियामा तिमी र मेरो भाइ इमान सामेल नहुनु। यो मेरो बिन्ती !
जनताले नै राजतन्त्र फालेका हुन्;-नेपाली कांग्रेसका युवा नेता पौडेल..